Toban Walxaato Oo Hadii Aad Soo Eegto Kugu Filan Cibro Qaadasho Iyo Towbad Keen Rasmi Ah.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Toban Walxaato Oo Hadii Aad Soo Eegto Kugu Filan Cibro Qaadasho Iyo Towbad Keen Rasmi Ah..
Published: March 5, 2014, 9:35 am
1- Soo eeg siiradii rasuulka (scw), si aad wax uga ogaato sifaadkiisii wanaagsanaa, waxaad ka dheeraan doontaa iimaan la’aanta iyo adduunyo jacaylka, waxaad ka dhaxli doontaa hab dhaqanka nolosha iyo waajibaadka saaran qofka muslinka ah.
2- Soo eeg xaramka, noloshaada hal mar ama sanad kasta hal mar, si aad iskaga soo baabiiso danbi wixii aad gashay, waxa aad ka dheeraan doontaa xumaan dambe, waxaad ka dhaxli doontaa taqwad iyo Alle ka cabsi.
3- Soo eeg xabaalaha toddobaad kasta hal mar si aad u ogaato noloshu waxa ay tahay, waxaad ka dheeraan doontaa macaasida, waxa aad ka dhaxli doontaa camal iyo cibaado suubban iyo quluubtaada oo qoyda.
4- Soo eeg cisbitaallada bil kasta hal mar, si aad u ogaato waxa uu caafimaadku yahay, waxa aad ka dheeraan doontaa dayacaadda wakhtiga aad caafimaad qabto, waxa aad ka dhaxli doontaa karti iyo firfircooni dheeraad ah iyo inaad ka faa’iidaysato wakhtiga aad caafimaad qabto.
5- Soo eeg hal mar oo ka mid ah nolashaada jeelka ama xabsiga si aad u ogaato qiimaha xorriyadda, waxa aad ka dheeraan doontaa ku dhiirrashada dunuubta ka dhanka ah dadka kale, waxa aad ka dhaxli doontaa edaab iyo adeec.
6- Soo eeg maktabadaha iyo xarumaha kaydka aqoonta, si aad u ogaato qiimaha erayga qoran, waxa aad ka dheeraan doontaa wax lagaaga sheekeeyo, waxa aad ka dhaxli doontaa cilmi iyo aqoon korodhsi.
7- Tijaabi nolosha guurka xalaasha ah, si aad u ogaato raxmada iyo naxariista uu Illaahay Quraanka inoogu sheegay ee nolosha lammaanaha, waxa aad ka dheeraan doontaa sinada, waxa aad ka dhaxli doontaa ubad iyo arsaaq waasac ah.
8- Soo eeg iskuullada iyo madarasadaha si aad u ogaato qiimaha waxbarashada u leedahay bulshada, waxa aad ka dheeraan doontaa jahliga, waxa aad ka dhaxli doontaa fahan iyo mustaqbal fiican.
9- Soo eeg macallimiinta iyo goobaha ciyaalka wax loogu dhigo maalin kasta hal mar si aad u ogaato waxa uu dul qaadku yahay, waxa aad ka dheeraan doontaa dabeecad xumaanta, waxa aad ka dhaxli doontaa khibrad iyo dad kala duwan la dhaqanka ama la noolaanshaha.
10- Soo eeg goobaha ka baxsan magaalooyinka (miyiga) si aad u ogaato halkii aynu ka nimid waxa aad ka dheeraan doontaa ka maagidda iyo in aad ka faanto hiddahaagii soo jireenka ahaa, waxa aad ka dhaxli doontaa hal-adayg iyo ku hirasho milgahii dhaqankeenna iyo dhab ahaan waxa ay ku tiirsan tahay nolosheennu.
Maxamed Fu’aad Xasan “Dhegocadde”